Adobe na-ewepụta Mmelite Nche Nche maka Flash Player | Esi m mac
Adobe na-ewepụta Mmelite Nche Nche maka Flash Player
Eziokwu bụ na anọla m Adobe Flash Player na kọmputa m ogologo oge (ma iMac na laptọọpụ) mana anyị enweghị ike ịkwụsị ime ka ị mara ma ọ bụrụ na anyị ahụ ozi dị mkpa na net gbasara mwepụta nke melite nke Adobe. ka idozi nsogbu dị oke mkpa.
Ndụmọdụ tupu ị banye n'okwu banyere mmelite ahụ na ntụpọ nche ahụ achọpụtara maka oge iri na atọ, bụ na ọ bụrụ na ịnweghị ịdabere na Adobe Flash Player ma ọlị, wepụ ya na Mac, kọmputa ma ọ bụ ebe ọ bụla ị rụnyere ya. Ngwaọrụ ahụ nọ na ụbọchị ikpeazụ ya n'agbanyeghị eziokwu ahụ ka nwee ebe nrụọrụ weebụ ebe a ka na-eji ya, mana imirikiti ọrụ enwere ike ịme na-enweghị ngwa mgbakwunye a nke na-eme ihe ọ bụla mebie nchekwa nke akụrụngwa anyị.
Oge nsogbu a karịrị ihe ndị Flash Player maara na nke a bụ n'ihi oghere nche nke na-enye ohere ịnweta ndị ọzọ na Mac. Adobe n'onwe ya maara oghere nchekwa a yana ya mere weputara ohuru ohuru maka sistemụ arụmọrụ dị iche iche: OS X, Windows na Linux.
Achọpụtara m n'ezie ihe ijuanya ọtụtụ oghere nchekwa Flash Player na-ata ahụhụ na ọ bụ ya mere m ji kpebie iwepụ ngwa mgbakwunye ahụ n'oge ahụ. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara ị ga - eji nwee Flash na Mac gị, gbaga wụnye mmelite ewepụtara ụnyaahụ na ị ga - ahụ n’ime njikọ a na ọnụ ọgụgụ nke 21.0.0.182 mbipute
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Adobe na-ewepụta Mmelite Nche Nche maka Flash Player
Budata Monit akụ mita n'efu
Pangu a naputara ekweghi na Jailbreak maka iOS 9.0 - 9.1 ka ibudata site na OS X